Lishabalele iphupho lika-Ashwin lokudlala ku-T20 World Cup ekhaya | Scrolla Izindaba
Lishabalele iphupho lika-Ashwin lokudlala ku-T20 World Cup ekhaya
15th Mar 2021
Lishabalele iphupho lomdlali wekhilikithi waseNdiya uRavichandran Ashwin lokudlala eNdebeni yoMhlaba ye-Twenty20 emhlabathini wasekhaya ngasekupheleni kwalo nyaka lingahlala linjalo nje – liyiphupho.
USkipper Virat Kohli uthe ayikho indawo yomdlali owaqopha umlando eqenjini lase-India, njengamanje elidlala imidlalo emihlanu ye-T20 ne-England ngoba uWashington Sundar ubevele enza kahle kuleli qembu endimeni efanayo.
“UWashington usasebenza kahle kakhulu kithina,” kusho uKohli.
“Ngeke ube nabadlali ababili abadlala endaweni eyodwa ngaphandle uma uWashington eba nesizini esabekayo.”
USundar udlale umdlalo wakhe wokuqala eqhudelana ne-Australia kulo nyaka futhi wahlabeka umxhwele ngebhande ngesikhathi kuqhubeka i-England ngama-85 no-96 engakahlulwa.
Kodwa u-Ashwin uthathe amawikhethi ayi-13 emidlalweni eyi-15 kwi-Indian Premier League yangonyaka odlule, waxosha abanjengoKohli noChris Gayle.
Ngobuhlakani bakhe bokuphotha ubuye wasiza i-India ukunqoba ngo-3-1 ochungechungeni lwama-test lwakamuva ibhekene ne-England.
Ushaye i-century ekunqobeni kwe-India emdlalweni wesibili e-Chennai futhi uthathe i-wicket yakhe yama-400 yokuhlolwa kwe-test yesithathu e-Ahmedabad, okuyi-test esheshayo kuleso sici sanoma yimuphi umuntu ophosayo waseNdiya ngokuya ngemidlalo.
Abaphosayo abathathu kuphela baseNdiya abathathe amawikhethi amaningi kuno-Ashwin kwikhilikithi ye-test, bonke yilabo abathathe umhlalaphansi.
I-India kulindeleke isingathe iNdebe yoMhlaba ye-T20 phakathi kukaMfumfu noLwezi.
Lena i- .
Sikulethela zonke izindaba ozidingayo - nezinye ongazidingi! I-Scrolla.Africa iwindi lomakhalekhukhwini wakho elikulethela izindaba zakamuva, ezombusazwe, ezemidlalo, osaziwayo, umculo nomdanso okwenzeka endaweni yangakini. Siyabathanda abantu abajwayelekile nabangajwayelekile. ENingizimu Afrika, i-Afrika yonkana kanye nomhlaba wonke. Akukhokhwa lutho - futhi sikulethela izindaba zangampela nezihamba phambili kumakhalekhukhwini wakho.
Lo mthombo wezindaba waqala ngokwesekwa okukhulu i-SAMIP (South Africa Media Innovation Program)
Sithinte ku-[email protected]
Mayelana nezeluleko ngezindatshana esizibhalile ungathumela i-imeyili ku-[email protected], bese sihlela ukuthi sizothintana kanjani
Umphathi we-Scrolla nguMungo Soggot owayengumhleli wezindaba wephephandaba i-Mail & Guardian, kanye nomhleli uZukile Majova owayephethe ithimba lezindaba emsakazweni i-YFM ngemuva kokusebenza kwi-M&G. UToby Shapshak yintatheli eqavile kwezobuchwepheshe eAfrka, naye waqala ngokusebenza e-M&G, nguyena umhleli omkhulu futhi ushicilela izindaba zephephabhuku ebizwa nge-Stuff, futhi uphinde abhalele amaphephandaba akwamanye amazwe kanye nawakuleli. UEverson Luhanga yena wayeyintatheli eqavile yobugebengu kanye nowayengusaziwayo wephephandaba i-Daily Sun. UGarry Rogers, umqondisi wokuthengisa, nguyena owayekhangisa ngokuhlela izindaba ze-M&G kanye ne-Daily Sun. UPhillip van Niekerk odume ngokuhlela izindaba ze-M&G, ungumeluleki omkhulu wokuhlela izindaba kanti futhi uphethe isu lethu entshonalanga neAfrika. Siphinde futhi sithole izeluleko e-London kuRichard Addis, ongusomabhizinisi wezindaba aphinde abe ngumhleli wezindaba ephephandabeni lezwe laphesheya i-UK Daily Express, nelase-Canada i-Globe and Mail. Izazi zethu zolimi ezisiza ngokuhlela ukubhala nguZuzile Ndlela kanye noSbongile Nonyana
Umthombo wezindaba i-Scrolla, ushicilelwe yi-Olduvai Pty, ebhalise nemithetho yokuziphatha nokusebenza ngendlela efanele, ngokushicilela izindaba eziyiqiniso, ezinembayo, nezinobulungiswa. Uma singahambisani nemithetho yokuziphatha ngendlela efanele, uma kungakapheli izinsuku ezingama-20 kushicilelwe lowo mbhalo, sicela uthintane noMmeli Womphakathi ku-011 4843612, nakwi-fax ethi: 011 4843619. Ungathintana Nomphathi wamacala [email protected] noma ufake isikhalazo kumthombo wezindaba i-Scrolla ku: www.presscouncil.org.za